အစားအစာကို ဆော့ကစားတတ်တဲ့ အရွယ်မှာ ကလေးကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းနိုင်မလဲ?
Home Parenting Child Nutrition အစားအစာကို ဆော့ကစားတတ်တဲ့ အရွယ်မှာ ကလေးကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းနိုင်မလဲ?
ရှစ်လကျော်လာတဲ့ ကလေးငယ်တွေက အစားစားချိန်မှာ အစားအစာတွေ ဆော့ကစား တတ်ကြတာ အမြဲလိုလိုပဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ်က ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်ထားရတဲ့ အစားအစာကို လွင့်ပစ်တာ၊ ကစားနေတာက မိခင်တိုင်း ဝမ်းနည်းရတဲ့ အခိုက်အတန့်ပါ။ မရေတွက်နိုင်အောင် ဖြစ်လာတဲ့အခါ မိခင်တိုင်းရဲ့ သည်းခံနိုင်စွမ်းကို ထိပါးလာနိုင်ပါတယ်။ ကလေးကို အတင်းအကျပ် စားခိုင်းမယ်ဆိုရင်လည်း ကလေးကအစားစားဖို့ ကြောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးအစား စားချင်လာအောင် ပိုနားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။
၁။ ကလေးကို အစားလျော့ကျွေးပြီး ရင်းနှီးတဲ့ ဖြည့်စွက်စာကို များများကျွေးပါ
ကလေးတွေက ရှစ်လကျော် လမ်းလျောက်တတ် စအရွယ်မှာ အစားအစာတွေနဲ့ ကသားရတာကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အားအင်တွေကလည်း သန်မာနေပြီး ထိန်းချုပ်ဖို့ ခက်ခဲလာပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အစားအစာတွေကို လွင့်ပစ်တာက များပြားလွန်းတာကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မရင်းနှီးတဲ့ အစားအသောက်ကို ကြောက်တာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြည်းဖြည်းချင်း နည်းနည်းနဲ့ စားချင်လာအောင် ကျွေးပါ။ ငယ်ငယ်က ကျွေးခဲ့တဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ဖြည့်စွက်စာကိုလည်း ဆက်ကျွေးပါ။
၂။ အာရုံစိုက်ပြီး စိတ်ရှည်ရှည်နဲ ကျွေးပါ
အလုပ်များတဲ့ မိဘတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကို အစားအစာ ဝင်အောင် ကျွေးရတာ အခက်အခဲဆုံးပါပဲ။ အချိန်မပေးနိုင်တဲ့အတွက် ကလေးကိုအာရုံစိုက်ပြီး စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ မကျွေးနိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုအချိန်မှာ ကလေးကို ချိန်းခြောက်ပြီး ကျွေးတာ၊ အတင်းကျွေးတာမျိုးတွေ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကလုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ကလေးရဲ့ အစားစားချင်တဲ့စိတ်ကို ရပ်တန့်ပစ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ အစားစားရမှာ ကြောက်ပြီး စားဖို့လည်း ငြင်းဆန်နိုင်တဲ့ အတွက် ဂရုတစိုက်ကျွေးပါ။
၃။ အစားအစာတွေကို လွင့်ပစ်ရင်တောင် အေးအေးဆေးဆေး နေလိုက်ပါ
ငြိမ်သက်တဲ့ အသွင်အပြင်ကို ပေးခြင်းက သူတို့ပစ်လိုက်တဲ့ အစားအစာကို ထပ်ပြီး အစားမထိုးတော့ဘူးဆိုတာ ကလေးကို သေချာသိစေပါတယ်။ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရင်တောင် အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့ အလေ့အထက ကလေးရဲ့ စားချင်တဲ့စိတ်ကို ပိုဖြစ်စေပါတယ်။ သူလွင့်ပစ်လိုက်ရင် သူမစားရတော့ဘူးဆိုတဲ့ အသိကို ပေးလိုက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစိတ်ရှည်မှုက ကလေးရဲ့ အစားအစာကို တန်ဖိုးထားပြီး ဗိုက်ပြည့်တဲ့ထိ စားနိုင်ဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
၄။ ရှင်းလင်းတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောပါ
အစားအသောက်ကို လွင့်ပစ်လိုက်ရင် အဲ့ဒီအစားအစာကို ထပ်မစားရတော့ဘူးလို့ ကလေး နားလည်အောင် ထပ်ခါထပ်ခါ ပြောပါ။ ကလေးတွေက ဒီအချိန်မှာ အရသာအသစ်တွေကို မြည်းစမ်းဖို့ သင်ယူနေတဲ့အတွက် ဒီစကားက ထိရောက်ပါတယ်။ လွင့်ပစ်လိုက်တိုင်း အပြုံးလေးနဲ့ မလုပ်သင့်ကြောင့် ပြောတဲ့အခါ အပျက်သဘော မဆောင်မိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ရိုးရှင်းတဲ့ စကားစုကိုပဲ သုံးပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ သိသိသာသာ ကလေးကအစားစားလာတာကို တွေ့လိုက်ပါလိမ့်မယ်။
၅။ ကလေးကို သီးသန့်စားပွဲ ထားပေးပါ
လမ်းလျောက်တတ်တဲ့ ကလေးအတွက် သင့်လျော်တဲ့ စားပွဲတွေရှိပါတယ်။ ထိုင်ခုံနဲ့ တွဲထားတဲ့ စားပွဲအမြင့်တွေက ကလေးအစားအစာတွေကို ကြမ်းပြင်ပေါ် ကစ်ချရင် ခက်ခဲစေပါတယ်။ ခုန်ဆင်းဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်တဲ့ အတွက် ကလေးက အစားစားဖို့ပဲ လုပ်ရတော့မယ့် အခြေအနေကို ဖန်တီးပေးပြီးသား ဖြစ်စေပါတယ်။ သီးသန့် အကန့်လေးတွေထဲမှာ အစားအစာတွေကို စားချင်သဖွယ် ပြင်ဆင်ပေးပြီး ကလေးရဲ့ အစားစားချင်စိတ်ကို တိုးအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Previous articleလမ်းလျှောက်တတ်စ ကလေးငယ်တွေရဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်ရေးအတွက် အချိန်ဇယားကို ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ?
Next articleဆယ်ကျော်သက်လူငယ်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မိဘတွေအတွက် Tip (၉) ခု